आज आमाको मुख हेर्ने दिन, श्रद्धापूर्वक मनाइँदै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
बिहान सबेरै उठी स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदानगर्ने, मिष्ठान्न भोजन खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशिर्वाद लिने गरिन्छ । आज आमाबाट टाढा रहेका सन्तानहरु आमालाई भेट्न पुग्छन् । आमालाई मीठा खानेकुरा खुवाउँछन् । विवाह गरेर पतिका घर गएका चेलीबेटीहरु मिठा परिकारहरु सहित आमाघर अर्थात माइतपुग्दछन् । विभिन्न कारणले आमालाई भेट्न नपाएकाहरुले भने संचारका साधनहरु मार्फत पनिसम्झने गर्दछन् । मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालहरुका माध्यमबाट पनि आमाप्रतिका भावनासम्झनाहरु व्यक्त गर्दछन् । पौराणीक कालदेखिनै मनाउदै आएको यस आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान् र कष्टपूर्णकामहरुको सम्झना गरिन्छ । आमा नभएकाहरूले पनि आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै आज श्राद्धतर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्दछन् । आज काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले भने भक्तपुरको हनुमानघाट पुगी आमाको सम्झनामा परम्परा अनुसार श्राद्ध तर्पण गर्दछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस मनसुन ढिलाई हुँदा देशभर गर्मी, चिसो गुमाउँदै जुम्ला
यो पनि पढ्नुहोस कथित माइली पाथिभराको पुजारीको अर्को कर्तुत, ५७ लाख झ्वाम पारेर भागेको खुलासा
२१,बैशाख.२०७६,शनिबार ११:५२ मा प्रकाशित
← आपत पर्दा के अब चीनवाट पेट्रोलीयम पदार्थ आउँछ ?
गोलभेँडाको सूप खानुका फाईदा यस्ता छन ? जानी राखाैं ? →
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा जारी
भुस्याहा कुकुरहरू !
बिचरा “उनीहरु” !
वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार आनन्ददेव भट्टको निधन
इतिहासमा आज : चन्द्रमाको कक्षबाट खिचियो पृथ्वीको पहिलो तस्बिर